हँसाउने अर्को माध्यम प्य्रांक भिडियो - विशेष - साप्ताहिक
हाँस्ने र हँसाउने मानिसका विभिन्न तरिका हुन्छन् अनि विभिन्न माध्यम पनि । चुट्किला, हास्य टेलिचित्र, प्रहसनजस्ता माध्यम पुराना भैरहेका बेला अहिलेको युवापुस्तामाझ स्ट्यान्ड–अप कमेडी र प्य्रांक लोकप्रिय माध्यम बनेका छन् । प्य्रांक अर्थात ठट्यौली, जसको उद्देश्य हुन्छ— मानिसहरूलाई चलाखीपूर्वक मुर्ख बनाउनु र दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नु । संवेदनशील विषयवस्तुमा विभिन्न तरिकाले प्य्रांक गरेर मानिसलाई केही समयसम्म कन्फ्युजनमा राख्नु र आश्चर्यमा पार्नु प्य्रांकस्टरहरूको विशेषता नै मानिन्छ । क्षणिक रमाइलो र हाँसोका लागि पश्चिमा मुलुकबाट सुरु भएको प्य्रांकलाई पछ्याउनेहरू नेपालमा पनि थुप्रै छन्, जसले विशेष गरी युट्युबको माध्यमबाट मनोरञ्जन प्रदान गर्ने गरेका छन् । युट्युबमा राम्रा र चर्चित प्य्रांक गर्न सफल केही प्य्रांकस्टरको खोजिनीति गर्दै साप्ताहिक संवाददाता प्रकाश रानाभाट :
सम्भवतः नेपालका पहिलो प्य्रांकस्टर आकाश सेढाई हुन् । उनले १९ वर्षको उमेरमा सन् २०१३ देखि विदेशी प्य्रांकहरूबाट प्रभावित भएर नेपालमा प्य्रांक भिडियो बनाउन थालेका थिए । आशिषले प्य्रांक गर्दा अहिलेसम्म १२ पटक कुटाइ खाएका छन् । आशिषको बम काण्ड र बन्चरो काण्ड युट्युबमा बढी रुचाइएको प्य्रांक हो ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी रुचाइएको र धेरैले हेर्ने युट्युब च्यानल हो— नेपाली प्य्रांक मिनिस्टरको च्यानल । नीरज श्रेष्ठले दुई वर्षअघि मात्र खोलेको यो च्यानल छोटो समयमै चर्चा कमाउन सफल भयो । यो च्यानललाई ४ लाख १९ हजारभन्दा बढीले सब्सक्राइभ गरेका छन् । वास्तविक कुराको प्रतिक्रिया एक्सन, कट नगरी जस्ताको तस्तै दर्शकमाझ प्रस्तुत गर्न प्य्रांक भिडियो बनाउने नीरजका अनुसार प्य्रांककै कारण आफूलाई धेरै जनाले चिने पनि नेपालमा प्य्रांक भिडियो बनाउन निकै गार्‍हो छ । प्य्रांकबाट आफ्नो सामान्य जीवन चलेको र बेलाबेला गाली र धम्कीसमेत आउने नीरज बताउँछन् । पहिले–पहिले मानिसलाई प्य्रांकका बारेमा बुझाउनै कठिन थियो भने कतिपयले प्य्रांकको नाम बाटोमा हिँड्ने मानिसलाई अनावश्यक तनाव दिने तथा दिक्दार बनाउने गरेको नीरज बताउँछन् । राम्रो प्य्रांक गर्न नयाँ पुस्ताका भाइबहिनीहरूले अझै धेरै सिकेर सभ्य तरिकाले प्य्रांक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नीरज भन्छन्— केहीलाई फिल्टर गरेर अघि बढ्नुपर्छ, होइन भने नेपालमा प्य्रांकको भविष्य छैन ।
नीरज समसामायिक विषय तथा देशमा भएका विभिन्न घटनाका बारेमा प्य्रांक भिडियो तयार पार्छन् । कुकुरको सेकुवा, डट्टी माइन्ड टेस्ट, घोस्टजस्ता प्य्रांक भिडियो उनको च्यानलका हिट प्य्रांक हुन् ।
नेपाली प्य्रांकस्टरका सञ्चालक आकाश सेढाईं सम्भवतः नेपालका पहिलो प्य्रांकस्टर हुन् । सन् २०१३ देखि युट्युबमा प्य्रांक भिडियो अपलोड गर्दै आएका सेढार्इंबाट प्रेरित भएर अरू धेरैले प्य्रांक भिडियो बनाउँदै आएका छन् । नेपाली प्य्रांकस्टर नामक युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्दै आएका सेढाईंको च्यानललाई ३ लाख ६९ हजारभन्दा बढीले सब्सक्राइभ गरेका छन् । धेरै जनाले रहरले र तयारी बिना नै प्य्रांक गर्ने थालेपछि अहिले प्य्रांकमा विकृति मौलाएको सेढाईंको ठम्याइ छ ।
एलिशको युट्युब च्यानल पनि युवापुस्तामाझ रुचाइएको प्य्रांक च्यानल हो । एलिश समाजमा घट्ने घटना तथा रुढिवाद तथा अन्धविश्वासमाथि प्रहार गर्ने किसिमका प्य्रांक भिडियो निर्माण गर्छन् । उनी यथार्थ र वास्तविकताको नजिक रहेर प्य्रांक भिडियो बनाउन माहिर छन् । डेढ वर्षअघि मात्र खोलिएको उनको च्यानललाई २ लाख ५० हजार जनाले सस्क्राइभ गरेका छन् भने उनका भिडियो १ करोड ८७ लाख ५४ हजार पटक हेरिएको छ । एलिशले बनाएको साउनको मेहेन्दी, आयो दुधे मकै, झाँक्री महाराज तथा बारबर आदि प्य्रांक भिडियो बढी रुचाइएको छ ।
युट्युबमा छोटो समयमै धेरैले रुचाएको च्यानल हो— नेप्लिज ड्रिमर । पासाङ लामाले चलाएको यो च्यानललाई ५८ हजारले सस्क्राइभ गरेका छन् । सुरुमा आफ्नो ब्लगको भिडियो अपलोड गर्न मात्र च्यानल खोले पनि पछि दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न प्य्रांक भिडियो निर्माण गर्न थालेको पासाङ बताउँछन् । स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका पासाङ हास्य क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्न प्य्रांकसँगै स्ट्यान्ड–अप कमेडी लगायतका अन्य विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने योजनामा छन् । प्य्रांकको माध्यमबाट हास्य क्षेत्रमा केही रोचकता आए पनि केहीले नबुझेर र नजानीकनै प्य्रांक भिडियो बनाएकाले अन्य क्षेत्रमा जस्तै प्य्रांकमा पनि विकृति मौलाएकोमा भने लामा चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
प्य्रांकस्टर रिभाइभल युट्युब च्यानलको सञ्चालक हुन्— आशिष प्रसाईं । चार वर्षअघि खोलिएको यो च्यानलको सस्क्राइभ २ लाख २७ हजार छ । इन्जोय एभ्री मोमेन्ट भन्ने नारासहित सुरु गरिएको यो च्यानलको उद्देश्य सामाजिक विषयवस्तुमा प्य्रांक गरेर दर्शक हँसाउनु भएको आशिष बताउँछन् । प्य्रांक भिडियो मात्र बनाउँदा समाजमा नराम्रो सन्देश गएकाले उनले अहिले सामाजिक चेतनामूलक भिडियोहरू पनि तयार पार्न थालेका छन् । प्य्रांक भिडियो बनाउन सजिलो नहुने र धम्कीहरू आए पनि आफूले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएको आशिष बताउँछन् । आशिषका टिकटक, धरहरा मःम, पप्पी आदि हिट प्य्रांक भिडियो हुन् ।
टप ५ प्य्रांक च्यानल
१. प्य्रांक भर्सेस प्य्रांक
२. यान क्यू टिभी
३. जस्ट फर लाफ गेग्स
४. म्यागिक अफ रहत
५. इम्प्रोभ एभ्री होयर
प्य्रांकसम्बन्धी विश्वव्यापी तथ्यांक
 पोल्यान्ड, स्कटल्यान्डजस्ता मुलुकमा मनाइने अप्रिल फूल मुर्ख दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलन छ ।
 स्पेनिस भाषा बोल्ने देशहरूमा डिसेम्बर २८ मा प्य्रांक गरेर रमाइलो गर्ने चलन छ ।
 डेनमार्कमा मे १ का दिन मज कट नामक पर्व मनाइन्छ ।
यो पर्वलाई पनि मुर्ख बनाउने दिनका रूपमा लिइन्छ ।
 स्वीडेनमा मे १ लाई जोकिङ डेका रूपमा मनाइन्छ ।
 भारतमा होली पर्वमा, स्पेन र ल्याटिन अमेरिकामा डिसेम्बर २८ मा सोझा मानिससँग प्य्रांक गर्ने चलन छ ।
रिस्ताको बलिउड यात्रा